အိုဘားမား၏စေ့စပ်ရေးပေါ်လစီကိုပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည် | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
အတိုက်အခံပါတီတွေကသုံးပွင့်ဆိုင်တွေ.ဆုံဆွေးနွေးပွဲလုပ်ပေးရေးတောင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာစစ်အစိုးရကလက်နက်ကိုင်အင်း အားစုများအနေနဲ.ရွေးကောက်ပွဲပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ရေးအတွက် မကြာခင်ကထိုင်းအစိုးရဆီအကူအညီတောင်းခဲ့သည်၊စစ်အစိုး ရက၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲ၏ရလာဒ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့်ကုလသမဂ္ဂ၏သဘောတူညီချက်နဲ.အညီချမှတ်ထားသောသုံး
လက်နက်ကိုင်အင်းအားစုများကအကယ်၍ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ရင်စစ်အစိုးရအတွက်အအောင်မြင်ဆုံးဗျူဟာဖြစ်သွားနိုင်သည်၊ လက်နက်ကိုင်အင်းအားစုများနှင့်စစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးသည် အတိုက်အခံအန်အေလ်ဒီပါတီနှင့်လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသား များ၏ဆက်ဆံရေးထက်ပိုမိုချောမောနေသလိုဖြစ်နေပါသည်၊၊စစ်အစိုးရသည်မိုက်မိုက်ကန်ကန်ဘဲပြော၊ပြောလိမ်လိမ်မာမာဘဲ
မှာမူတည်နေသလိုလိုဖြစ်နေ ပြန်တော့လေသွားတာပေါ့၊ပြောချင်တာကအန်အေလ်ဒီပါတီက အကယ်၍စစ်အစိုးရကအခြေခံဥပဒေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခွင့်၊ပြင်ဆင်ခွင့်မပေးရင်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို.ပြတ် ပြတ်သားသားမပြောရဲသေးပါ။
ထို.သို.အကြောင်းကြောင်းတွေအကြောင်းကြောင်းကြောင့်၊စစ်အစိုးရကလက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားအင်းအားစုများနှင့်ညှိပြီး လုပ်စရာရှိတာကိုဆက်လုပ်နေရုံဘဲရှိတယ်၊အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနဲ.အဆင်ပြေအောင်ပေါင်းပြီးအပေးအယူလုပ်နေပါသည်၊နော က်ဆုံးအနေနဲ.အိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံအားအထူးတောင်းဆိုချက်တစ်ခုနှင့်ထပ်တောင်းထားသဖြင့်ထိုင်းအစိုးရကလိုက်လျော်မှု
အကျင့်စာရိတ္တပျက်စီးမှုကြောင့်၊စိတ်ဓါတ်မရိုသားမှုကြောင့်လဲအများကြီးပတ်သက်နေသည်ကိုတွေ.ရှိရပါသည်၊ ဒါတွေကို၊ ဒီမိုကရေစီအရေးကိုထောက်ပံ့ပေးနေသောနိုင်ငံများကဘာမှမသိဘူး၊ ကျနော်တို.တင်ပြတဲ့ရီပို. (Report) ကိုသာကြည့်ပြီးယုံကြည်နေတယ်လို. အတိုက်အခံတစ်ချို.၏လွဲမှားစွားယုံကြည်ထားကြောင့်နဲ.လည်သက်ဆိုင်သည်။
နောက်ဆုံးပြောချင်တာက၊၂၀၀၇ ခုနှစ်ဗမာပြည်အကျပ်အတည်းနောက်ပိုင်းမှာ စစ်အစိုးရ၏လမ်းပြမြေပုံခုနှစ်ချက်ကိုထော က်ခံတဲ့သူဟာ ဂမ်းဘာရီပါ၊သူ.နောက်မှာဂျပန်တို.၊တရုတ်တို.ကအားရပါးရနဲ.လိုက်ပါလာသည်၊အခုနောက်ဆုံးက၊အမေရိကန် ကလဲပါလာသလိုလိုဖြစ်နေပြီ၊ဗမာပြည်အရေးကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့နိုင်ငံအများစုသည် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်အဆုံး အဖြတ်တစ်ခုခုပေးဖို.ပြင်ဆင်နေကြပါသည်၊ အီယူတို.ကစစ်အစိုးရအပေါ်ပိတ်ဆို.မှုတွေဆက်လုပ်မလား၊နောက်ဆုတ်မလား၊ အမေရိကန်အစိုးရက ပေါ်လစီပြောင်းဖို.စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်ပါ၊ အတိုက်အခံတွေကိုထောက်ပံ့ပေးရုံနဲ.ဗမာပြည်မှာဒီမိုကရေစီ စနစ်ပေါ်ပေါက်နိုင်၊မပေါ်ပေါက်နိုင်၊စစ်အစိုးရနဲ.စကားပြောပြီးဒီမိုကရေစီပြောင်းနိုင်၊မပြောင်းနိုင်၊တိုင်းရင်းသားတွေ၏အခန်း ကဏ္ဍဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲစသဖြင့်သုံးသပ်နေတဲ့အချိန်ပါ၊ဒီအချက်တွေကိုသတိမူစေချင်သည်၊
ဗမာပြည်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးအတွက်ထိုင်းကသမာသမဒိုင်လူကြီးလုပ်ပေးရင် အန်ဒီအေဖ်ကြိုဆိုကြောင်းကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်က တည်ကပြောနေတာ၊
Date : 2003-03-16
NDF welcomes mediator role by Thailand to end conflict in Burma
The Central executive Committee of the National Democratic Front (NDF) has expressed warm welcome to the Prime Minister of Thailand and his government for the offer to participate in the process of seekingapeaceful solution to the longstanding conflict in Burma asagood neighboring gesture.
Inastatement has clearly stated its position on the offer of the Prime Minister of Thailand to playamediator role between the State Peace and Development Council (SPDC) and the armed ethnic groups for the national reconciliation of Burma.
The statement further announced: “The NDF, which isapolitical alliance and was formed by armed-resistance ethnic groups in 1976, has attempted several times with great efforts in order to solve the problems by political means, but without success. Therefore, the NDF would like to request and encourage to the Prime Minister of Thailand to play mediation and state its willingness to cooperate in suchapeaceful process as necessary.”
The full text of the NDF is given below:
(1) It is learned through the Thai newspapers and news agencies after having visited Burma that Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra offered to play mediator between the State Peace and Development Council ( SPDC ) and the armed ethnic groups of Burma.
(2) The NDF warmly welcomes the Prime Minister of Thailand and his government for the offer to participate in the process of seekingapeaceful solution to the longstanding conflict in Burma asagood neighboring gesture.
(3) The NDF, which isapolitical alliance and was formed by armed-resistance ethnic groups in 1976, has attempted several times with great efforts in order to solve the problems by political means, but without success. Therefore, the NDF would like to request and encourage to the Prime Minister of Thailand to play mediation and state its willingness to cooperate in suchapeaceful process as necessary.
(4) However, the NDF believes it is necessary to study and discuss the basic guidelines that the Thai government will employ in these diplomatic negotiations. We also believe that the NDF should be allowed to meet and discuss with the body that will lead negotiations.
(5) Owing to the fate of every ethnic group in Burma depends on achieving real peace and democracy, the NDF welcomes political dialogue leading to the cessation of war and violence in Burma. As the dialogues have been one of the main political objectives of the NDF, this position statement is released in order to work out in accordance with the NDF policy.